wararka maanta-arlaadii.net » Madaxweyne Farmaajo Oo khilaafka jira Dartiisa U baajiyaay Safar uu ugu tagi lahaa Qadar
Madaxweyne Farmaajo Oo khilaafka jira Dartiisa U baajiyaay Safar uu ugu tagi lahaa Qadar
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa la filaayay in ay maanta u duulaan dalka Qatar iyada oo uu safarkaas dib u dhacay.
Safarkan waxaa uu qorshahu ahaa in 13-kii Bishan uu Madaxweynaha ku tago dalka Qatar hayeeshee waa uu baaqday, haddana waxaa uu qorshahu ahaa in maanta oo ay Bishu tahay 18 uu tago dalkaasi hayeeshee mar labaad ayuu dib u dhacay.
Wafdiga Madaxweynaha waxaa ka mid ah lix Wasiir,Xildhibaanno iyo saraakiil kale oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya kuwaas oo la qorsheeyay in ay ka mid noqdaan xubnaha Madaxweynaha u raaci lahaa dalka Qatar.
Baaqashada safarka Madaxweynaha waxaa sabab u ah khilaafka cusub ee u dhaxeeya laamaha fulinta iyo xeer dajinta dalka.
Khilaafka u dhaxeeya Guddoonka Golaha shacabka ee ay gadaal kala riixeyso Xukuumadda Soomaaliya ayaa hakad galiyay dhamaan shaqooyinkii Golaha shacabka waxaana ay Xildhibaannada u kala jabeen laba garab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in markii ugu horreysay uu ka hadlo Khilaafka u dhaxeeya Guddoonka Golaha shacabka iyada oo la filayo in isku dayo xallinta khilaafka hadda ka dhexjira laamaha xeer dejinta iyo fulinta dowladda Soomaaliya
Kanada Oo ka Cabaneesa Nambara Furaha Soomaliya wato Oo Dadka lagu Dhacaayo
Wiil 17 jir ah oo iska casilay Xil. Gudoomiye ku xigeen Degma ka tirsan Shabeelada Dhexe